FADLAN AKHRI! http://www.knwautobody.com U BAAHAN tixgelin IYO AS xaalad ogolaaday Isticmaal OF http://www.knwautobody.com.
By helitaanka ama isticmaalaya site kan waxaad WAKIILLADA in aad leedahay awood buuxda inay u dhaqmaan si aad naftaada u xidhi, DHINAC SADDEXAAD KASTA, SHIRKADDA, AMA CIDDA SHARCI, Iyo in Isticmaal IYO / AMA WADA, SIDA AAD wadaan isticmaalka AMA falgalaan, LA goobta ka dhigan AAD IYADOO akhriyey waxaanan oggolahay ereyadan ISTICMAALKA iyo sidoo kale heshiisyadii kale waxa Aannu Post laga yaabaa in goobta.
BY jahee, Booqashada, ISTICMAALKA, AMA, lalana xiriiro http://www.knwautobody.com amase uu wax ku Banner, POP-UP, Ama xayeysiiska u muuqata IT ON, Aad ku raaceyso heshiiska ALL QODOBADA EE ERAYADA ah SIYAASADDA ISTICMAALKA NIDAAMKA EE GAARKA AH http://www.knwautobody.com.
http://www.knwautobody.com gaar ah oo beenisay in ACCESS TO qof kasta oo khuseynaysa CARRUURTA EE ONLINE ILAALINTA ASTURNAANTA ACT (CUP) OF 1998.
http://www.knwautobody.com xaq u leedahay inay diido QOFKA AMA siladda sabab kasta xalaal. Shuruudaha EE Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, OO aad aqbasho AS xaalad la daawado, http://www.knwautobody.com la oggol yahay si ay u ururiyaan iyo xogta lagu kaydiyo, MACLUUMAADKA ujeedada ka saarida iyo isticmaalada kale BADAN.
ERAYADA ah HESHIISKA ISTICMAALKA beddeli kartaa waqti ka waqti. Booqdaa waxay WAAJIBKA AH xoojin, Iyadoo qayb ka ah tixgelinta fasax si ay u helaan http://www.knwautobody.com, In ay sii IYAGA wixii isbedel SIDA iyadoo dib loo eegayo ERAYADA THIS PAGE OF ISTICMAALKA mar kasta oo ay BOOQAN http://www.knwautobody.com.
XISBIYADA tahay shuruudaha heshiiska ISTICMAALKA
Visitors, daawadayaasha, users, macaamiishu, xubnaha, xulufadeeda, ama macaamiisha, si wadajir ah lagu wacayo “Visitors,” waa xisbi heshiiskan. Bogga internetka iyo milkiilayaasha markabka iyo / ama ka shaqeeya waa xisbi heshiiskan, taasina loo yaqaan “Website.”
Isticmaalka macluumaadka Internetka ee
Haddii aad galay heshiis qoraal ah express la website si lid ku ah, Kooxda martida, daawadayaasha, macaamiishu, xubnaha, xulufadeeda, ama macaamiisha aan xaq u lahayn inay u isticmaalaan warbixintan oo ay goob ganacsi ama dadweynaha; ay xaq u lahayn in mowjadda, nuqul, badbaadin, daabacdo, iibiyo, ama daabacaan qaybo ka mid ah waxa ku jira website-kan. By helitaanka waxyaabaha uu website-kan, aad ogolaato inaad xaaladan ee helidda iyo aad u qirayaa in loo isticmaalo wax kasta oo aan la ogalayn waa sharci darro ah oo aad keeni karto ciqaab ciqaab ah ama madani. Mar, Visitor leeyahay xuquuq lahayn wax alla wixii ay u isticmaalaan waxa ku jira, ama qaybood oo dhanba,, oo ay ku jirto database-ay, bogagga aan la arki karin, bogagga lala, code dahsoon, ama hantida kale ee caqliga goobta laga yaabaa in ku jira, sabab kasta ama lagu isticmaalo wax kasta oo wax alla wixii. In la aqoonsado xaqiiqda ah in uu dhib noqon karta in tiradeeda magdhow saxda ah oo ka dhalatey jebinta qodobkan, Visitor Ogolaaday in ay mag milkiilayaasha http://www.knwautobody.com la magdhow liquidated ee lacagta Mareykanka ah. $100,000, ama, haddii loo xisaabin karaa, kharashka dhabta ah iyo magdhaw dhabta ah jebinta qodobkan, waa weyn hadba. Keeneyso Visitor in uu isagu ama iyadu fahamsan yahay in la oggolaado bixinta tani waa xaalad ka mid ah helitaanka http://www.knwautobody.com iyo in helitaanka http://www.knwautobody.com dhigan aqbalo.
LAHAANSHAHA WEBSITE AMA XAQA LOO ADEEGSADO, IIBINTA, Daabacaan TUSMADA website-kan
Bogga internetka iyo waxyaabaha ay iska leedahay ama shati milkiilaha website-ka ee. Waxyaabaha ku jira website-ka waa in la qaadanayaa in lahaansho iyo xuquuqdiisa. Visitors lahayn xuquuqda alla in content goobta. Isticmaalka website content sabab kasta waa sharci darro haddii aan la samayn iyada oo express heshiis ama ogolaansho website-ka.
HYPERLINKING goobta, CO-brandingeksperten, “Tukado” IYO SITE Xigashada MAMNUUC
Haddii aan si cad u oggolaaday website, qofna HyperLink laga yaabaa in this site, ama qaybood oo dhanba,, (lugu daro, laakiin aan ku xaddidnayn, logotypes, alaabooyinka, brandingeksperten ama waxyaabaha xuquuqdooda) si ay u sugnaaday sabab kasta. Intaas waxaa sii dheer, lama ogola in aad tixraaca URL (Cinwaanka internetka) oo ah website ama bog kasta oo ka mid ah website-kan in kasta oo warbaahinta ganacsi ama aan ganacsiga ahayn oo aan ogolaansho express naga, mana nihin kuwo aad u ogol yahay in ay 'jir’ goobta. Waxaad si gaar ah isku raacaan in ay iskaashi la Website in ay soo saarto ama de-dhaqaajiso wixii hawlo sida, oo masuul ka ah oo dhan waxyeelo ka timi xad-bixinta waxa ay noqon. In la aqoonsado xaqiiqda ah in uu dhib noqon karta in tiradeeda magdhow saxda ah oo ka dhalatey jebinta qodobkan, aad ogolaato in ay mag milkiilayaasha http://www.knwautobody.com la magdhow liquidated ee lacagta Mareykanka ah. $100,000, ama, haddii loo xisaabin karaa, kharashka dhabta ah iyo magdhaw dhabta ah jebinta qodobkan, waa weyn hadba. Waxaad ballanqaadayso in aad fahamto in la oggolaado bixinta tani waa xaalad ka mid ah helitaanka http://www.knwautobody.com iyo in helitaanka http://www.knwautobody.com dhigan aqbalo.
AFEEF EE kooban SITE
http://www.knwautobody.com afeefanaysaa masuuliyad kasta ah ee saxsanaanta content muuqashada ee, lala on, ama ku xusan on http://www.knwautobody.com. Visitors u qaadan oo dhan halis la xidhiidha daawashada, reading, iyadoo la isticmaalayo, ama ku tiirsan macluumaadkan. Haddii aad si kale ku sameeyay qandaraas express si lid ku ah noo leh, waxaad xaq u lahayn in ay ku tiirsan yihiin xog kasta oo ku jira, taasina sida sax ah. Waxaan ka dhigi jirin damaanad sida.
AFEEF dhibaatada ka dhigay inay your computer ama software ka, lalana xiriiro WEBSITE AMA jira. BOOQASHADA MARTIDA soo qaadayaa in HALIS ALL OF fayrusyada, Dirxi, Ama waxyaabo kale u kharribo.
Waxaan mas'uul ka jirin burbur kombiyuutarada ama software ah ee soo booqda ama qof booqde danbe la xidhiidhaa wax ka code wax fasaadiya ama xogta oo la qasdin maray in computer booqdaha ee. Mar, views booqdaha lana falgala this site, ama boorar ama-pop baaritaan ama xayeysiiska soo bandhigay dul, uu halis u gaar ah.
AFEEF dhibaatada ay keento downloads
Visitor downloads warbixin ka this site ee halista u gaar ah. Website ka dhigaysa damaanad lahayn in downloads waa bilaash codes computer wax fasaadiya, lugu daro, laakiin aan ku xaddidnayn, fayrusyada iyo gooryaan.
By arkaysid, iyadoo la isticmaalayo, ama lalana hab kasta oo la this site, oo ay ku jiraan boorar, advertising, ama pop-ups, downloads, iyo sidii xaalad ka mid ah website-ka in ay u ogolaadaan in uu daawado xalaal, Visitor weligiis xayuubin oo dhan xaq u leeyihiin in sheegashada dhaawaca ah iyo sharaxaad kasta oo dhan oo ku salaysan arrin kasta oo sababaha keentay in wax kasta oo dhibaato ay suurtagal tahay, sida foosha xun ama ballaaran iyadoo aan loo eegayn, haddii jireed ama mid caadifadeed, saadaalin karo ama lama filaan, in shakhsi ahaan ama ganacsi ee dabiiciga ah. Wixii maamulada in hadda karta iney u oggolaadaan u ogaato kuwaas oo naga deyn ugu badan kama badan doonto qadarka lacagta by, haddii ay jiraan, isticmaalka website-kayaga ama adeeg.
Intaa waxaa dheer, ma ogolaan in ay qabtaan noo qabsan wax waxyeelo la xidhiidha arrimaha ka baxsan gacanta ku, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, falimihiisii ​​Ilaah, dagaal, argagixisada, fidmaddu, rabshado, falal dembiyeed, masiibooyinka dabiiciga ah, carqalad ah isgaarsiinta ama kaabayaasha, shaqada yaraanta ama carqaladayn (oo ay ku jiraan weerarada sharci darro ah), yaraani ka mid ah maaddooyinka, iyo wax kasta oo dhacdooyin kale oo aan xakamayn karno.
Visitor Ogolaaday in ay dhacdo oo uu sababa dhaawac noo ama cid sadexaad oo ay sabab u tahay ama la xiriira isticmaalka http://www.knwautobody.com, Visitor noo indemnify doonaa, iyo, haddii lagu dabaqi karo, na difaacdo, wax sheegashada magdhow.
Visitor ogolaado sidii xaalad ka mid ah daawashada, in xiriirka u dhexeeya Visitor iyo Website loo arko gudbin. All soo gudbiyo, oo ay ku jiraan oo dhanba qaybo, muuqaallo kale ku jira ku dul, ama wax ka mid ah waxa ku jira soo gudbinta, waxay noqon doonaan hantida gaarka ah ee Website iyo waxaa loo isticmaali karaa, iyada oo aan fasax dheeraad ah, si loogu isticmaalo ganacsi iyada oo aan tixgelin dheeraad ah ee nooc kasta ah. Visitor Ogolaaday in kaliya loo sii sheego xogta in Website ka, kaas oo uu rabo inuu weligiis u ogolaan Website ay u isticmaalaan hab kasta siday u arko inay ku fiican. “Qaybgelayo tartanka” Sidoo kale waa Rizqi ah Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Ogaysiis No dheeraad ah ee nooc kasta ah sabab kasta ayaa loo baahan yahay in la siiyo Visitor iyo Visitor si cad u fasaxaysa in la fahmo in xaq u leedahay inaad aragto waxa la dhaafi iyadoo shardi u ah ogolaansho si aad u eegto ama la macaamilaan website ka.
Iyadoo qayb ka ah tixgelinta in Website ay u baahan tahay la daawado, iyadoo la isticmaalayo ama dhaqanka website-kan, Visitor oggolaado inuu isticmaalo-qaadidda ku qabanaya sheegashada kasta, muran, ama muran (“SHEEGASHADA”) nooc kasta (in heshiiska, xaalmarinta ama haddii kale) ka gaadho ama la xiriira iibsiga this, alaabta, ay ka mid yihiin arrimaha xaqiro, arrimaha gaarka ah, iyo marka la eego arrimaha la isticmaalo.
Xalinta lagu qaban karaa iyadoo la raacayo xeerarka American Xalinta Khilaafaadka ururka ku jira saamaynta taariikhda muran loo gudbinayaa American Xalinta Ururka. Warbixin ku saabsan American Xalinta Ururka, xeerarkiisa, iyo qaabkeeda oo waxaa laga heli karaa American Xalinta Ururka, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Dhageysiga ka dhici doona magaalada ama gobolka ee milkiilaha http://www.knwautobody.com.
Xaaladdan oo kale ma siladda doonaan, booqdaha, xubin, macmiilka ama macmiil waxay xaq u leeyihiin in ay tagaan maxkamadda ama ay leeyihiin dacwo xeerbeegayaal. Siladda, booqdaha, xubin, macmiilka ama macaamiisha aan xaq u yeelan doontaa in ay ku hawlan yihiin daahfurka dacwadda ka hor, marka laga reebo sida ku cad sharciyada; ma waxaad xaq u yeelan doontaa in aad ka qayb mid wakiil ka ah ama xubin ka mid ah fasalka ka mid ah dadka dacwoonaya ku saabsan maado kasta oo sheegay inay gar-; Go'aanka garqaadaha ayaa noqon doona finalkii iyo qabanaya xuquuqda kooban oo rafcaan.
Xisbiga ayaa ka jirta loo soo celin doonaan xisbiga kale ee kasta iyo kharashka oo dhan ee la xidhiidha qaadidda khilaafka, oo ay ku jiraan kharashka qareenka, lacagta aruurinta, lacagta baaritaan, kharashka safarka.
XUKUNKA iyo goobta
Haddii wax kasta oo ku saabsan gadashada this hor geeyn doonaa maxkamad sharci ah, pre- ama post-heshiisiin, Siladda, booqdaha, xubin, macmiilka ama macaamiisha u ogolaaday in uu in awood kaliya oo ku habboon in ay gobolka iyo magaalada ku dhawaaqay in macluumaadka xiriirka milkiilaha internetka ah haddii aan si kale halkan ku cad. Haddii ay dhacdo in dacwada waa in maxkamad federaalka, maxkamadda ku habboon waxay noqon doonaan maxkamadda dhow federaalka in milkiilaha http://www.knwautobody.com cinwaanka.
Siladda, booqdaha, xubin, macmiilka ama macaamiisha Ogolaaday in sharciga lagu dabaqi karo in lagu dabaqo doonaan, kiisaska oo dhan, in ka mid ah gobolka milkiilaha http://www.knwautobody.com.
Iibiyaha ah ee badeecada ay tani tahay: